Sigstr: Mamorona, manaparitaka ary mandrefy ny fampielezana sonia ny mailaka | Martech Zone
Sigstr: Mamorona, manaparitaka ary refeso ny fampielezana sonia ny mailakao
Alatsinainy Desambra 4, 2017 Alatsinainy Desambra 11, 2017 Douglas Karr
Ny mailaka rehetra alefa avy amin'ny boaty mailakao dia fotoana iray ara-barotra. Na dia mandefa ny mailaka amina mpanjifa taonina aza izahay, dia mandefa mailaka 20,000 hafa koa amin'ny fifandraisana isan'andro eo anelanelan'ny mpiasa, ny mpanjifa, ny vinavina ary ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny olona. Ny fangatahana ny rehetra hanisy sora-baventy hampiroboroboana taratasy fotsy na webinar ho avy dia mazàna dia mandeha amin'ny fahombiazana kely. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha ilay fangatahana fotsiny, ny hafa manelingelina ny rohy, ary ireo olona izay mety tsindrio ilay antso-na-hetsika dia tsy nahazo izany mihitsy.
Raha tsy mino ianao fa zava-dehibe ny sonia mailaka, zahao ity fanadihadihana heatmap fizahana maso ity avy Eyequant.
Ao no misy izany Sigstr miditra! Sigstr dia manolotra fitantanana afovoany ny fampielezanao sonia mailaka ahafahan'ny mpampiasa rehetra havaozina eo noho eo. Ny fanentanana dia azo aorina amin'ny alàlan'ny fampidirana sary na fampidirana lahatsoratra. Ny mpiasanao dia tsy mila manisy kaody iray akory - ny ekipa mpivarotra anao dia afaka miova fanentanana isaky ny maniry izy ireo.
Sigstr aza dia mamadika kinova mety indrindra amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny finday sy ny birao misy topi-maso ho azy roa. Ary mazava ho azy, Sigstr dia manome tsotra Analytics mba hanehoana ny isan'ny fotoana nojerena ny fampielezan-kevitra ary koa ny tsindry isaky ny fampielezana na nataon'ny mpiasa!
Sigstr koa dia mamela ny famoronana vondrona. Ity dia endri-javatra tsara satria afaka manana vondrona ho an'ny ekipa mpanohana anao voatendry amin'ny fampielezan-kevitra hampiroborobo ny fanolorana vokatra vaovao ianao, raha ny vondrona mpampikarama anao kosa dia tendrena hanao fampielezan-kevitra amin'ny pejy momba ny asa, raha toa kosa ny ekipanao mivarotra dia manolotra taratasy fotsy amin'ny Fiverenana amin'ny Fampiasam-bola ny vahaolana!
Io dia ahafahan'ny mpampiasa manampy ao anaty vondrona ary avy eo ny vondrona tsirairay dia azo ampiana amin'ny fampielezan-kevitra manokana! Tena faly aho Sigstr nanao sonia avy hatrany izahay - ary nahafinaritra ny fampiasana sy fitantanana manerana ireo mpiasanay.
Fampidirana sonia an-tserasera Sigstr
Mampiasa Sigstr tsotra amin'ny orinasa rehetra satria efa tafiditra ao amin'ny Active Directory, Outlook, Exchange, Office 365, Google Suite, Gmail ary Apple Mail izy ireo.
Act-On - Ampitomboy ny ezaka ara-barotra ao amin'ny Act-On amin'ny alàlan'ny fampidirana sonia Sigstr sy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifandraisana amin'ny mailaka Act-On.
Hubspot - Sigstr koa dia manana fidirana miaraka Hubspot izay ahafahanao mampifanaraka an'izay Hubspot Smart List ary atolory amin'ny fampielezana Sigstr ABM manokana, jereo ny hetsika fandaharam-potoana ao Hubspot rehefa manindry izy ireo dia mamorona Hubspot fifandraisana mifototra amin'ny hoe iza izy ireo mandefa mailaka, ary mampihatra ny fifandraisana amin'ny sonia mailaka amin'ny mavitrika Hubspot Fihetsiketsehana!
Marketo - Ampifanaraho amin'ny Marketo Smart Lists sy ny Landing pages ny varotra sonia nataonao. Azonao atao koa ny mampifangaro sonia amin'ireo maodelin'ny mailaka Marketo.
Salesforce - Ampifanaraho amin'ny fanentanana sy ny tatitra ny Salesforce. Azonao atao koa ny mampiditra sonia amin'ireo môdely VisualForce.
SalesLoft - Manampy sonia Sigstr ary manao fampielezan-kevitra amin'ny serasera mailaka Cadence anao
Pardot - Ampifanaraho amin'ny fampielezan-kevitra sy tatitra Pardot ny varotra fanaovan-tsonia nataonao. Azonao atao koa ny mampifangaro sonia amin'ireo maodelin'ny mailaka Pardot.
Mangataha Demo Sigstr
Tags: Act-OnActonsonia mailaka aktonsora-baventymailaka fampielezan-kevitrafanoratana mailakasonia mailakafanarahana masoheatmaphubspotsonia mailaka hubspotmarketosonia mailaka marketopardotsonia mailaka famelanasonia mailaka an'ny salesforcesoniasigstr